ठूलो परिवर्तन र ठूलो परिवर्तनको लागि समय: याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्: मार्टिन भ्रिजल्यान्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	12 मई 2020 मा	• 22 टिप्पणिहरु
कोरोना संकटले हामीलाई कठोर परिवर्तनहरूको बारेमा सोच्न बाध्य पार्छ। मैले पहिले नै यो घोषणा गरिसके पछि मेरो वेबसाइट आधा दिनको लागि DDoS आक्रमणको अधीनमा थियो। मैले एउटा विचित्र बयान दिएँ: "मेरो योजना निकट भविष्यमा यस सरकार र सम्पूर्ण प्रणालीलाई कमजोर पार्न र उखेल्न ठोस योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने छ।"
मैले त्यो योजनामा ​​लामो समय सम्म काम गरें र धेरैलाई पर्दा पछाडि प्रस्तुत गरें। यो यस्तो योजना हो जुन प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको बारेमा हो, अनलाइन मतदान प्रणाली मार्फत जुन ब्लकचेन टेक्नोलोजी मार्फत सुरक्षित छ।
हो, प्रविधिमा खतराहरू छन्, तर सबैभन्दा ठूलो खतरा पावर पिरामिडमा छ। त्यो प्रणालीलाई ओभरहाल गरेर फेर्नु पर्छ। यो त सम्भव छ यदि यो चलाखीपूर्वक व्यवस्था गरिएको छ। शक्ति केन्द्रीय बिन्दुमा जानु हुँदैन, तर शक्ति जनतामा जानुपर्दछ।
हामी यसलाई फरक तरिकाले गर्न जाँदैछौं!
पूर्ण रूपमा भिन्न! र तपाईंको सहयोग आवश्यक छ। केहि प्रश्नहरू पहिले:
के तपाईं वा तपाईंको बच्चाहरू डिजिटल जेलमा बस्न चाहनुहुन्छ?
के तपाइँ तपाइँ वा तपाइँका बच्चाहरूलाई एक खोप लगाउन लगाउन चाहनुहुन्छ जुन तपाइँलाई थाहा छैन योमा "विशेषज्ञहरु" ले भन्दा अर्को के समावेश गर्दछ?
के तपाइँ एक राज्य-निर्भर कम्युनिस्ट प्रणालीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ जुन सबै बिग डाटा मार्फत निगरानी गरिएको छ?
No? हामीलाई थाहा छ यो प्रणालीलाई छिटो पल्टाउने समय आइसकेको छ! प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सहित स्वतन्त्र देशका लागि समय: सँगै बस्ने नयाँ तरिका। कठपुतली क्याबिनेट र मुकुटबाट छुटकारा पाउन समय।
पुरानो प्रणाली झूटा प्रजातन्त्रमा आधारित छ, जहाँ राजनीतिक दलका सबै कठपुतलीहरूले ताज मात्र सेवा गर्न र जनतालाई छनौटको भ्रम प्रदान गर्न प्रशिक्षण पाइसकेका थिए।
तिनीहरू छनौट प्रदान गर्दछन् जुन त्यो समूहको लागि उपयुक्त छ प्रत्येक राय र समाजमा हरेक स्वाद र बहसको माध्यमले स्पष्ट विरोधाभासको माध्यमबाट पर्दा पछाडि उही शक्ति र एजेन्डाको रक्षा गर्दछ।
विपक्षी, बायाँ, दायाँ, उदार सबै, उनीहरू सबै मुकुटको बफादारी र मिडियामा भयंकर छलफल, चुनावको बखत हुने छलफलको कसम; तिनीहरू केवल त्यहाँका मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि हो कि तिनीहरूको आवाज सुनेको छ।
प्रजातन्त्र जसरी हामीले यो सबै जान्दछौं हाम्रो जीवन एक प्रहसन हो। हामी सामूहिक सम्मोहन, एक सामूहिक अन्धोपनमा बाँचिरहेका छौं।
विश्वास गर्नुहोस् यो फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ
किनकि हामी प्रारम्भिक उमेरदेखि नै सामाजिक प्रणालीमा बाँचिरहेका छौं, हामी अझ राम्ररी जान्दैनौं। यो हाम्रो कन्डिसन हो जुन हामी टाँसेका छौं।
“हामीलाई केवल सरकार चाहिन्छ र त्यसपछि प्रजातन्त्र नै उत्तम रूप हो। हामी के सोच्छौं, केन्द्रीय रूपमा व्यवस्थित, सम्झौताहरू जति बढी समान हुनेछ र त्यो उपयोगी छ ", हामी सोच्छौं।
"त्यसोभए सबैले उस्तै डामर प्रयोग गर्दछ, हामीसँग राम्रो सार्वजनिक यातायात छ, कर राम्ररी मिलाइएको छ र हामी हाम्रो जीवनको सबै पक्षमा राम्रो प्रवाहित छौं।"
केहीको लागि, सम्राटसँग वास्तवमै कपडा छ
केहि व्यक्तिले वास्तवमा देख्दैनन् कि सम्राट्ले लुगा लगाएको थिएन। तिनीहरू दृढ रूपमा प्रणालीमा विश्वास गर्छन् हामी यो जान्दछौं र धेरै आश्रित छन् र आफ्नो सम्पूर्णतामा यसलाई प्रेम गर्छन्।
यो कोरोना स crisis्कटको समयमा मात्रै केहीले देख्न थाल्छ कि हामी बिस्तारै टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट प्रणालीतर्फ हेरफेर गरिरहेका छौं। अरूले यसलाई आवश्यक अग्रिमको रूपमा देख्नेछन्; प्रगति जुन भविष्यको महामारी रोक्न र वातावरण बचत गर्न सक्दछ।
तर के यसले जनसंख्यालाई टेक्नोलोजीकल नियन्त्रण वेबमा राख्नुपर्दछ, वा विश्वका धेरै जसो समस्याहरू औषधी, तेल, द्रव्यमान उत्पादन लगायतका पैसा कमाउने शक्ति पापी भूकम्प धनीको नतिजा हो?
मुकुट, हाम्रो शाही घर
हाम्रो शाही घरले यसमा राम्रो भूमिका खेलेको छ। तिनीहरू आफ्नो शक्ति र पूंजी मुख्यतः कच्चा माल र तेल को निकासी को owणी छ। त्यसोभए हामी विगतका अन्धकारका कुरा गरिरहेका छैनौं।
र राजनीतिज्ञहरू कससित निष्ठाको कसम खान्छन्? 'मुकुट' लाई। उनीहरूले पावर ब्लकमा शपथ ग्रहण गर्दछन् जसले सबै कानूनमा हस्ताक्षर गर्दछ र जसलाई न्यायाधीश, अधिकारी, वकिल र पुलिसले निष्ठाको कसम खान्छन्। तिनीहरू मानिसहरूप्रति शपथ गर्दैनन, तर मुकुटको लागि दिन्छन्।
त्यो मुकुटले "परमेश्वरको अनुग्रहले" नियम दिन्छ। कसैले पनि भगवानको अनुग्रह प्रदर्शन गर्न सक्दैन र त्यसैले त्यो शक्ति एक मोम नाक हो।
यो एक विश्वास प्रणाली हो जुनसँग समाजमा सबै जना सर्तित छन्, किनकि आमा बुबा र हजुरबा हजुरआमा, परिवार र साथीहरू: सबैलाई समान झूटको साथ शर्त राखिएको छ र यसैले यो भन्दा राम्रो अरू जान्दैनन्।
हामी प्रचलित प्रणालीमा भर पर्न जारी राख्न सक्छौं, जुन हामीले बढ्ता केन्द्रित गर्दैछौं यदि हामी आफैले आफैलाई लिने कुरामा विश्वास गर्छौं भने हामी चीजहरू पनि राम्ररी मिलाउन सक्छौं। हामी सबै प्राविधिक संसाधनहरू फ्याँक्न सक्दैनौं जुन हामीलाई एक पटकमा प्रयोग गरिन्छ, हामी सबै अचानक पूर्वाधार र संगठनबिना बाँच्न सक्दैनौं। हामी तथापि यसको प्रशासन र निर्णय लिने लाइनहरूलाई उल्ट्याउन सक्छौं।
सरकारले जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरू समावेश गर्न आवश्यक छ जसले विश्वासको मुकुटको लागि होइन तर मानवतालाई शपथ दिन्छ। मानव निर्णयको सीधा कथन हुनुपर्दछ। के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो सम्भव छैन, किनभने धेरै व्यक्तिलाई धेरै धेरै चीजहरूको थोरै ज्ञान छ? यो राम्रो तर्क हो, तर धेरै चीजहरू केवल सरलीकृत गर्न आवश्यक पर्दछ।
यदि जनता मापनमा बृद्धि चाहँदैनन् भने त्यहाँ मापनमा कुनै वृद्धि हुने छैन। यदि मान्छे सोच्दछन् कि मिडिया प्रचार प्रसार जस्तै बढी हेर्न शुरू गरीरहेको छ, तब यो उल्टो हुनु पर्छ। यदि व्यक्ति सेन्सरशिप चाहँदैनन्, त्यहाँ सेन्सरशिप हुनेछैन। र यस्तै, र यस्तै।
शक्ति संरचना को उल्टो
तर सबै कुरा शक्तिको रेखा उल्टाउँदै सुरु हुन्छ। तिनीहरू मुकुटको सट्टामा मानिसहरूमा हिंड्नु पर्छ। तिनीहरू मानिस दौडनु पर्छ; मानवता लाई। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरहरू सिधा मतले निर्वाचित हुनुपर्दछ र उनीहरूले जनताप्रति वफादार हुने कसम खान्छन्। साथै सबै न्यायाधीशहरू, नागरिक कर्मचारीहरू, पुलिस, सैन्य, वकिलहरू, आदि। सबैले जनताप्रति वफादारीको कसम खान पर्छ र सबैलाई बहुमतले उत्रन सक्छ।
प्रविधिबाट प्रजातन्त्र सम्भव हुन सक्छ। ब्लकचेन टेक्नोलोजीले यो सुनिश्चित गर्न सक्छ कि तपाईले मानिसहरुको आवाजलाई अप्रिय र unadulterated बोल्न दिन सक्नुहुन्छ। के यो थोरै विचित्र विचारहरू होइनन्? के यसका लागि सहयोग हुन सक्छ? जब तपाईले सुन्नुहुन्छ कि एलोन कस्तूरी यसको पक्षमा छ, के तपाई अकस्मात् कान सुन्नुहुन्छ?
'क्लाउड' बाट मतदान
जो कोही मतदान गर्न चाहन्छन् तसर्थ कानून र कानूनको अनुमोदनको सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्दछ, र तिनीहरूको म्याद समाप्ति मिति हुन्छ। मतदान तपाईंको कम्प्युटर वा पहिचानको एक प्रकारको टेलिफोन मार्फत गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले, हामीले कानूनको सम्पूर्ण सूचीमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ जुन अब ठाउँमा छन्: 'रहन सक्दछ' वा 'जानुपर्दछ'। हो, आजको ऊन जटिलताको सट्टा सरलीकरण र सरलीकरण।
यसको मतलब यो छ कि हामीले ठूला बहुराष्ट्रियहरू एक तुलना प्रणालीमा संलग्न गर्नुपर्दछ। जे भए पनि, हामीले बिल गेट्स जस्ता व्यक्तिहरूको शक्तिबाट छुटकारा पाउन चाहानुहुन्छ। उही सत्ताको उल्टो पनि त्यहाँ लिन सक्छ।
कोन सूची को लागी सजिलो छ। हामीले वास्तवमा टेक्नोलोजी र ठूलो डाटा धीमा गर्नुपर्दछ र त्यो हामी कसरी त्यस प्रणालीलाई फीड गर्न सक्छौं।
के एलोन कस्तूरी होईन जो हाम्रो दिमागलाई क्लाउडमा झुण्ड्याउन चाहन्छ र यसलाई एआईमा जोड्न चाहन्छ। के बिल गेट्सले पेटन्ट २०२०-०2020०060606० our लाई मस्तिष्कलाई ब्लकचेनमा ब्लक बनाउनका लागि आवेदन गरेनन्? हो, तर हामी यसलाई भोट दिन सक्छौं। हामी टेक्नोलोजीलाई सुस्त बनाउन सक्छौं र एआई विकासकर्ताहरूलाई एआई नि: शुल्क लगाम नदिन आवश्यक छ।
धेरैलाई सबै कानून वा निर्णय मानिसहरूसामु राख्न गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यसो भए ती सबै निर्णयहरूमा व्यक्तिहरूको एक दिनको काम हुन्छ र अन्ततः व्याकुल हुन्छ। यद्यपि यसको अर्थ यो पनि हुन सक्दछ कि निर्देशकहरू ऊन संचारको सट्टा सरलता र संक्षिप्तताको लागि मूल्यवान हुन्छन् वा उनीहरूको लागि न्याय गरिन्छ। त्यसोभए उनीहरूले सरल र स्पष्ट काम पुर्‍याउनुपर्दछ र त्यसैले हामीलाई विभिन्न प्रकारका ड्राइभरहरू चाहिन्छ।
नकारात्मक जस्तो देखिन्छ वास्तवमा सकरात्मक परिवर्तन हुनुपर्दछ: नियमन मात्राबाट गुणमा जान्छ।
फाइदा यो हो कि हामी ब्रेक स्केलिंग र केन्द्रीकरणमा राख्न सक्छौं र जटिलताबाट सरलतामा जान सक्छौं। अर्को समर्थक भनेको हामीले गोप्य रूपमा ठूलो धन र मुकुट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सट्टा वास्तविक प्रतिनिधिहरू पाउँछौं। जनताको प्रतिनिधित्व फेरि त्यो शब्दको वास्तविक अर्थ के हुनु पर्छ।
त्यो तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ
हामी अहिले अवस्थित असंवैधानिक प्रणालीलाई अस्वीकार गरेर सुरु गर्दछौं। निराधार मतलब यो मानवताको मौलिक अधिकारको बिरूद्ध जान्छ।
संविधान मुकुट द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ, र कानून पनि मुकुट द्वारा हस्ताक्षर गरे। कोरोना स In्कटमा हामीले देख्यौं कि सरकारहरूले संविधानलाई वेवास्ता गर्छन् र संविधानलाई ओभरराइड गर्ने नयाँ कानूनहरू छिटो बनाउँदछन्। हामीले कानूनको सिद्धान्तको सट्टा मौलिक अधिकारको सिद्धान्तमा फर्कनु पर्छ। त्यो मौलिक अधिकारको आधारमा, सबैसँग समान अधिकार छ। यसैले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै समाधान हो।
चरण १ तसर्थ मुकुटमा आधारित पुरानो प्रणाली हो र प्रजातन्त्रको उपस्थिति अस्वीकार गर्दछ। यसको मतलब यो स्थिति लिनु कि हामीलाई लाग्ने अधिकार असंवैधानिक हो। त्यहाँ भगवानको कुनै अनुग्रह छैन र त्यहाँ मानिसप्रति निष्ठाको शपथ हुनुपर्दछ।
यसको मतलब यो हो कि हामी सजाय, नियन्त्रण र स्थिति संग दंड अस्वीकार गर्न सक्छौं:
“कसैमाथि म अधिकार छैन किनकि संविधान र कानूनले ताजले चिह्न लगाएको छ। त्यो मुकुट परमेश्वरको अनुग्रहमा आधारित छ। सबै संस्थानहरू जस्तै अदालतहरू, कर अधिकारीहरू, निरीक्षण, आदि, ताजमा निष्ठाको कसम खान्छन्। सबै न्यायाधीशहरू, राजनीतिज्ञहरू, सेना, पुलिस र यस्तै अन्य कुराले ताजमा निष्ठाको कसम खान्छन्। तिनीहरू हामी माथि अधिकार गर्दैनन्। "
त्यसैले चरण १ कुनै पनि अधिकार अस्वीकार गर्नु, जरिवाना र जरिवाना अस्वीकृत गर्नु र कर दायित्व अस्वीकार गर्नु हो। हामीले पुरानो प्रणाली खसाल्नु पर्छ।
यदि तपाईं अदालतमा आउनुभयो भने, तपाईं न्यायाधीशलाई औंल्याउन सक्नुहुन्छ कि उसले मुकुट (भगवानको अनुग्रह) लाई वफादार छ र त्यसैले तपाईं माथि कुनै अधिकार छैन। तपाईं मुकुट (भगवानको अनुग्रह) द्वारा बनाइएको व्यवस्थालाई देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं जान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
हामी एक नयाँ प्रणाली निर्माण गर्दैछौं, एउटा निवेदन जारी गरेर जुन साइटमा सकेसम्म धेरै व्यक्तिले हस्ताक्षर गरे। त्यो निवेदन वर्तमान सरकार र मुकुटमा पठाइएको छ र उनीहरूले राजीनामा गर्नु पर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ।
हामी टिभी हेर्न रोक्छौं, मिडिया र राजनीतिज्ञहरू सुन्दैछौं, र हामी बुझ्छौं कि सोशल मिडिया पनि आउनेहरूको हातमा एक उपकरण हो।
हामी स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय सरकार र ब्रसेल्सको शक्ति अस्वीकार गर्दछौं र स्क्र्याचबाट शुरू गर्दछौं।
मन्त्रालयहरू अवस्थित रहन सक्छन् र तिनीहरूले केवल आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन मा एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्न आवश्यक छ। यी मन्त्रालयका नेताहरूले जनतामा बफादारीको कसम खानु पर्छ र तुरुन्तै स्वतन्त्रता-प्रतिबन्धित उपाय र कानूनहरूको समीक्षा गर्न थाल्नु पर्छ।
वित्त मन्त्रालयले ट्याक्सको भाँडोमा के छ र कति debtsणहरू भएको छ भन्ने बटनको स्पर्शमा देखाउँनै पर्छ।
ती debtsणहरू अस्वीकृत हुनुपर्दछ र शून्य सेट गर्नुपर्नेछ। हामी तुरुन्त बिटकॉइनमा स्विच गर्छौं र यूरो र डलरमा जान दिन्छौं। यूरोपीयन केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंकहरूको शक्ति र प्रभाव यसैले समाप्त हुन्छ। उनीहरू कहिँ पनि बाहिर मुद्रण र त्यो फिएट मनी प्रणाली दिवालिया छ।
"राष्ट्रिय debtण तुरुन्त अस्वीकृत हुनुपर्दछ र शून्यमा सेट गर्नुपर्नेछ।"
मानिसहरूलाई १ हप्ताको लागि बिटकॉइन खाता खोल्ने अवसर दिइन्छ र वित्त मन्त्रालयले तुरुन्त सबैलाई १ बिटकोइनको रकम जम्मा गर्दछ।
Bitcoin ले कभरेज प्रदान गर्दछ। कुनै अधिक फिएट पैसा छैन, तर नयाँ कभर गरिएको मुद्रा, जहाँ बिटकॉइन नयाँ "सुनको मानक" हो।
सबैले आधारभूत आय प्राप्त गर्दछ। यो कम्युनिष्ट प्रणाली जस्तै छ जुन अहिले सरकारहरूले काम गरिरहेका छन, तर सत्ताको रेखा जनतातर्फ जान्छ र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र स्थापना भएको हुनाले निरंकुश सरकारको जोखिम कम हुन्छ।
विक्रेता र कम्पनीहरूलाई बिटकॉइन भुक्तानी अनुमति दिने प्रणाली स्थापना गर्न एक महिना दिइन्छ, तर तुरून्त भुक्तान विधिको रूपमा प्रत्यक्ष बिटकोइन लेनदेन स्वीकार गर्दछ।
ब्ल्याकचेन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली स्थापना गर्न आन्तरिक विभागलाई १ महिना दिइन्छ, जसले जनतालाई अस्वीकार वा समीक्षाका लागि कानूनहरू सबमिट गर्न अनुमति दिन्छ।
DigiD मतदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर अनुहार पहिचान वा डिजिटल खोप प्रमाणपत्र मार्फत थप डिजिटलीकरण जनता द्वारा मात्र स्वीकृत गर्न सकिन्छ।
सबै अवस्थित कानून तुरून्त अवैध छ। हामी एक बाहिर समय फेरी घुसाउने छौं। प्रवर्तक, न्यायाधीश, सेना, प्रहरी र न्यायपालिकाले तुरुन्तै आफ्नो गतिविधिहरू रोक्छन्।
गृह मन्त्रालयले एक महिना भित्र ब्लकचेन मतदान प्रणाली पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, जसबाट जनताले तुरून्त आफ्ना प्रतिनिधिहरू मनोनयन गर्न सक्दछन्।
प्रत्येक मन्त्रालयमा १ जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुनेछन् र त्यो निर्वाचित प्रतिनिधि ब्लॉकचेन मतदान प्रणालीबाट सबै भन्दा बढी मतले निर्वाचित हुन सक्दछ।
यी नयाँ नेताहरूले तुरून्त सुरू गर्नुपर्नेछ र युट्यूब वा अन्य सोशल मिडियामा सोझै संचारको माध्यमबाट मानिसहरूलाई साप्ताहिक रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
उनीहरूले तुरून्त कानूनको मात्राको एक सिंहावलोकन गर्छन् र सुनिश्चित गर्दछन् कि वर्तमान झुकाव र कानूनको मात्रा विघटन र संक्षेपमा एक संख्यामा सारिन्छ जुन प्रत्येक मंत्रालयको पचास अधिकतम हो।
नयाँ आधारभूत नियमहरू नियम र १००० शब्दहरूको सारांश मार्फत नयाँ 'समाज नियमहरू' को रूपमा मानिसहरूलाई प्रस्तुत गरिन्छ।
जनता समीक्षाको लागि ब्लकचेन मतदान प्रणाली मार्फत यी 'समाज नियमहरू' अनुमोदन, अस्वीकार वा फिर्ता गर्न सक्दछन्।
मिडियाले तुरून्त समाचार र छलफल कार्यक्रम प्रसारण रोक्नु पर्छ। नयाँ जन प्रतिनिधिहरूले सम्पूर्ण प्रणालीलाई संशोधन नगरेसम्म कुल मिडिया समय समाप्त हुनै पर्छ।
त्यसकारण उनीहरूले सम्पूर्ण मिडिया प्रणाली र सबै समाचारपत्रमा नियाल्नुपर्दछ, र यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि पुरानो स्थापित अर्डरको सट्टामा मानिसहरू काम गरिरहेका छन्।
कर दायित्व बन्द गर्दै अस्थायी हो। यो एक निलम्बन हो। कोरोना संकटको बेला जनसंख्यालाई सहयोग पुर्‍याउने ती दशौं अरबौं मानिसहरू कहाँबाट आउँछन्? त्यो पैसा कहिँ पनि प्रिन्ट गरिएको छैन। सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली फिएट पैसामा आधारित छ (कुनै पनि शारीरिक र अथाह मुद्रित द्वारा कभर गरिएको छैन)।
हो, कर दायित्व सपाट गर्नु अन्तिम छैन। यो अस्थायी हो, जबसम्म नयाँ जन प्रतिनिधिहरू (जसले वास्तवमै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्) मन्त्रालयमा राखिन्छन् र सम्पूर्ण प्रणाली सफा र पुनःसेट गर्न सकिन्छ।
यसैले करको अन्त्य अन्तिम हुनेछैन, तर यूरोपियन युनियन र ECB तिर प्रवाह हुने अरबौं प्रणालीबाट प्रणाली सफा गर्नु आवश्यक छ।
हामी त्यसलाई कसरी व्यवहारमा लाउने छौं? त्यो एक स्पष्ट स्पष्ट याचिकाबाट सुरू हुन्छ, जसमा तपाईं आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं परिवर्तन हुन चाहानुहुन्छ। हामी चेतना र जागरणको कुरा गर्न सक्छौं, तर मात्र परिवर्तन कार्यबाट आउँछ। यहाँ याचिकाबाट पोइन्टहरू पढ्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको मतदान पनि गर्नुहोस्। केवल सँगै हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौं र त्यो सबै हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट सुरू हुन्छ।
यो याचिकाको साथ हामी घोषणा गर्छौं:
त्यो मुकुट शक्तिहीन छ
त्यो कि सरकारले तुरुन्त आफ्नो कर्तव्यहरु राख्नु पर्छ
कि सबै कानून र नियमहरु तुरून्त अवैध र संशोधित छन्
त्यो सबै प्रवर्तन तुरून्त निलम्बित छ
त्यो कर संग्रह तुरून्त निलम्बित छ
त्यो जरिवाना अमान्य छ र संग्रहहरू निलम्बित छन्
कि पुलिस, न्यायपालिका, सेना, न्यायाधीशहरू, कार्यान्वयनकर्ताहरू, निरीक्षकहरू र सबै निजामती कर्मचारीहरूले जनताप्रति वफादार हुनुपर्छ।
त्यो राष्ट्रिय invalidण अवैध छ
ECB र अन्य लेनदारहरूको क्रेडिट दावी अवैध छ
कि त्यहाँ एक प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हुनेछ (जस्तै यहाँ वर्णन गरिएको छ)
यो याचिकाको साथ हामी माग गर्दछौं:
राजा, रानी, ​​पहिलो र दोस्रो कक्षका सदस्यहरू र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको गतिविधिहरू तुरून्त समाप्त गर्ने
प्रत्यक्ष विकास - र १ महिना भित्र डेलिभरी - वित्त मन्त्रालय द्वारा एक blockchain मतदान प्रणाली को साथ, जहाँ नयाँ प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गर्न सकिन्छ (एक मंत्रालय प्रति एक प्रतिनिधि, नियुक्त गर्न र एक blockchain मतदान प्रणाली मार्फत मतदान गर्न)।
कि वित्त मन्त्रालयले १ हप्ता भित्र नेदरल्याण्ड्समा १ बिटकोइन जम्मा गर्दछ
ब्लकचेन मतदान प्रणाली मार्फत मुकुट र राजनीतिज्ञको सार्वजनिक परीक्षण, वाक्यको दायरा र सामग्री सहित
त्यसोभए अब नयाँ वेबसाइटमा जानुहोस्, निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् र / वा सदस्य बन्नुहोस्:
रूट III लोकतान्त्रिक कैबिनेट अब उपस्थित छैन
डा। Plandemic भिडियो जुडी मिकोविट्स एक घटना २०१२ नक्कली समाचार जाल (भिडियो) हो
ट्याग: blockchain, कोरोना संकट, मुकुट, लोकतान्त्रिक, प्रत्यक्ष, विशेष, सेवकाई, ministers, याचिका, राजनीतिज्ञहरू, राजनीति, मतदान गर्नुहोस्, प्रविधि, परिवर्तन गर्नुहोस्
12 मई 2020 मा 21: 57
म यसलाई अधिक लक्ष्यको लागि विस्तृत रूपमा अवधारणाको रूपमा देखाउँछु, तुरून्त कार्यान्वयन हुने कुरा होईन। अराजकता ग्यारेन्टी, यदि तपाईं यो गर्नुभयो। करहरू रोक्नुहोस्? तुरून्तै एक मिलियन सिभिल कर्मचारीहरूलाई कामबाट बाहिर राख्नुहोस्, सयौं हजारौं व्यक्तिहरू काम गरिरहेका असंख्य परियोजनाहरू रोकिनेछन्, ठूलो पूंजी उडान सुरु हुनेछ (जब सम्म सारा संसार एकै पटक सहभागी हुँदैन), आदि।
एक चरण पछि चरण परिवर्तन मलाई सफल हुने बढी लाग्छ। तपाईंले पहिले जानकारीको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा ओभरल गर्नुपर्नेछ, मिडिया। यदि व्यक्तिले सबै कुराको बारेमा निर्णय गर्नुपर्‍यो भने, तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि उनीहरूले प्रत्येक निर्णयको पक्षधर र विपक्षको बारेमा इमान्दारक कथा प्राप्त गरे। तर म ईमान्दारै मानव प्रकृतिसँग डराउँछु, जुन सबै प्रकारका परिवर्तनहरु लाई एकदम प्रतिकूल छ, र धेरै भावनात्मक संवेदनशील। तपाईं लगभग निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि, उदाहरणका लागि, नयाँ रोड कतै निर्माण गर्नुपर्‍यो, र उनीहरूले क्यामेराको अगाडि कोही व्यक्तिहरू भेटे जसले यस सडक तिनीहरूको घरको नजिक छ वा जंगलको एक टुक्रा मार्फत गुनासो गर्छन् भने १०० मध्ये 90 ० मान्छेले फेरि मतदान गर्नेछन्।
र त्यसैले यो धेरै प्रोजेक्टहरूको साथ हुनेछ, मलाई लाग्छ। म डराउँछु कि त्यति धेरै जमीनमा फेरि एक पटक फेरि हट्नेछैन, र तपाई वास्तवमा एक क्लासिक कम्युनिस्ट प्रणालीमा अन्त हुनुहुनेछ जुन सोभियत संघसँग मिल्दोजुल्दो छ, उन्नत प्रविधिसँग पूरक हुनेछ। मलाई लाग्दैन त्यो बस्नको लागि उत्तम संसार हो।
मलाई लाग्छ, तपाईंहरू जस्तो कि वर्तमान प्रणालीको सब भन्दा राम्रो समय भएको छ, र भ्रष्टाचार, भतीजावाद र सबै प्रकारका लबी समूहहरू द्वारा कमजोर छ कि निकै धेरै शक्ति दिइएको छ। शाही परिवार कुनै पनि हालतमा धेरै पुरानो स्थान हो (यद्यपि डब्ल्यूएमबी अझै पनि नेदरल्याण्ड्स-प्रोमोसन वा-फ्लोक्लोर वा केही चीजको 'मन्त्रालय' को रूपमा रहन सक्छ, तर सबै शक्ति खोसियो)। यो बिभिन्न तरिकाले गर्नुपर्दछ, तर ती प्रसार गर्नुहोस् लगभग १० वा सो बर्षमा जुन मलाई एकदमै छिटो देखिन्छ, जुन ठाउँले लिनुपर्ने ठूलो उथलपुथललाई दिँदै हो। एक व्यक्ति, एक मानिस, त्यो मनोवैज्ञानिक साथ व्यवहार गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
12 मई 2020 मा 22: 40
स्पष्ट हुनको लागि: कर दायित्व अस्थायी हो।
कोरोना संकटको बेला जनसंख्यालाई सहयोग पुर्‍याउने ती दशौं अरबौं मानिसहरू कहाँबाट आउँछन्?
त्यो पैसा कहिँ पनि प्रिन्ट गरिएको छैन। सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली फिएट पैसामा आधारित छ (कुनै पनि शारीरिक र अथाह मुद्रित द्वारा कभर गरिएको छैन)।
हो, कर दायित्व सपाट गर्नु अन्तिम छैन। यसैले यसले 'निलम्बित' पनि भन्छ। यो अस्थायी हो, जबसम्म नयाँ जन प्रतिनिधिहरू (जसले वास्तवमै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्) मन्त्रालयमा राखिन्छन् र सम्पूर्ण प्रणाली सफा र पुनःसेट गर्न सकिन्छ।
कर दायित्वको अन्त्य अन्तिम हुने छैन, तर यसलाई ईयू र ECB तर्फ ठूला अरबौं बहावबाट हटाउनु पर्छ।
फेरि यसको बारेमा सोच्नुहोस्।
12 मई 2020 मा 22: 53
फिएट मनीको बारेमा राम्रो विवरण (हल्का हास्यलाई छिद्रण गर्दै)
12 मई 2020 मा 22: 58
र यो अझै
12 मई 2020 मा 23: 06
र इमान्दार हुन, म एक कदम पछि कदम परिवर्तनमा विश्वास गर्दिन। यो सबै कठोर हुन सक्छ र यो धेरै चाँडै गरिनु पर्छ। यसमा एक महत्त्वपूर्ण तत्व यो छ कि पावर लाइनहरू माथिबाट तल उल्ट्याउनुपर्दछ। मानिसहरु का एक सीधा कथन हुनुपर्दछ र प्रणाली एकदम overha پول हुनु पर्छ। सरलीकरण कुञ्जी हो।
13 मई 2020 मा 00: 59
मार्टिन, यदि मैले राम्रोसँग बुझें भने तपाईले समानान्तर संरचनाको वर्णन गर्नुहुन्छ जुन डिक्टोले विद्यमान संविधान "जनताको नाममा" स्थगित गर्दछ। यसैले यसको अर्थ संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य हो जसलाई तथाकथित संसदीय "प्रजातन्त्र" ले प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले गणतन्त्र ...
ठिकै मैले सोच्दछु कि यो विरोधाभासहरूले भरिएको एउटा अनौंठो प्रणाली हो। व्यायामशालामा सामाजिक विज्ञान पाठको क्रममा, शिक्षकहरूले सँधै सरल प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दछ "यदि लोकतान्त्रिकरण हुन सक्दछ भने (सरकार) अधिकारीहरूले ताजको वफादारीको कसम खान्छन् भने?" त्यहाँ मैले त्यसपछि हलवेमा हेर्न सकें .. त्यस सम्बन्धमा थोरै परिवर्तन भएको छ।
12 मई 2020 मा 23: 35
कम्पनीहरूले त्यस्तो क्रान्तिमा र विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा पनि भाग लिनुपर्नेछ। यहाँ पनि हामी त्यस्तो प्रणालीमा फर्कन सक्दछौं जहाँ निक्षेपकर्ता र नीतिधारकहरू मालिक बन्छन्। उदाहरणका लागि बोनस, वेतन नीति र अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मतदान यसैले ब्लकचेन मार्फत गर्न सकिन्छ। त्यस पछि, अन्य क्षेत्रहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। वर्तमान समयका वर्तमान समस्याहरूमध्ये एक हो कि ठूला बहुराष्ट्रियहरूले सरकारी नीति निर्धारण गर्छन्। मलाई लाग्छ कि यसलाई पहिले नै चरण १ मा समाधान गर्नुपर्नेछ।
12 मई 2020 मा 23: 54
तपाईंको समाधान हालको टेक्नोलोजीहरूको साथ एक राम्रो समाधान हो। तर म दृढताका साथ सोच्दछु कि यो टेक्नोलोजिकल युग लामो समय सम्म रहनेछ। हामीले पहिले नै पहिले देखेका छौं। ब्रह्माण्डले सबै कुरा रिसेट भएको सुनिश्चित गर्दछ। एलोनको स्याटालिटहरूले काम गर्न छाड्नेछ, इन्टरनेट तल जान्छ, मानिसहरूले आधारभूतमा फर्कनु पर्छ। अहंकार उच्च आयाम मा बाँच्न छैन।
हामी पहिले नै एक बिन्दुमा छौं जहाँ हामी परिस्थितिबाट सचेत छौं। हामी अरूलाई दोष दिन्छौं तर यसको लागि हामी आफैं चुकाउँछौं। हामी सबैसँग हाम्रो कम्प्युटरहरूमा माइक्रोसफ्ट अपरेटिंग सिस्टमहरू छन्। हामी सबै करहरू तिर्दछौं जसले विली, रुट्ट र युद्धहरू कोष गर्दछ।
हामीले केवल दोषीलाई स्वीकार्नुपर्दछ र हामी जस्तै समाधानको साथ आउँदछौं कसरी हामी आफैं चीजहरू रिसेट गर्न सक्छौं।
तपाईं सहि हुनुहुन्छ, यो हामीमा निर्भर छ। हाम्रो अस्तित्व को उद्देश्य आफैलाई काम गर्न को लागी हो। आफु र तपाईको आत्मासँग खुशी र कृतज्ञ हुनुहोस् र तपाईको आत्मालाई तपाईको अहंकारमाथि हावी हुन दिनुहोस्।
यदि तपाईंले आफैंलाई जाँच गर्नुभएन भने, अरू कसैले यसलाई गर्नेछ!
14 मई 2020 मा 00: 57
वास्तवमै त्यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ रणनीतिक सम्पत्तिले एनिलग भेरियन्टको लागि अतिरिक्त थप्न वा डिजिटल संस्करणको सट्टामा एक विकल्पको रूपमा छन।
13 मई 2020 मा 09: 20
मद्दत गर्न सक्दैन तर सहमत
तर हामी को साथ लागिरहेका छौं।
तिनीहरू स्वेच्छाले र एक A4 पानासँग निवेदनहरूको भरमा जान्छन्?
क्राउनको वर्गहरू पहिले सचेत हुनुपर्दछ, हाय, हो
अन्यथा केवल एक क्रान्ति?
13 मई 2020 मा 09: 30
चाखलाग्दो कुरा के हो भने मानिसहरूले क्रान्ति मनपर्दछ, तर उनीहरू विश्वास गर्दैनन् कि हामी आफैं क्रान्ति हुनुपर्दछ।
तपाईं प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक मोडेल स्थापना गरेर यसलाई लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब तपाई आफैले कार्य गर्नु पर्छ।
हामी गुनासो गर्छौं र भन्छौं कि उनीहरूले हेगमा केही गर्दैनन्। हामी टिप्पणीहरू जस्ता गुनासो गर्दछौं: "विपक्षी दलहरू कहाँ छन् !?"
केवल वास्तविक परिवर्तन गर्न सक्दछ र वास्तवमा आफैलाई सक्रिय बनाएर आउनु पर्छ। धेरैको लागि त्यो एक कदम टाढा हुन्छ।
हामी पढ्न चाहन्छौं लक ताका बारे के खराब छ, भ्याक्सिनको बारेमा खराब छ र बिल गेट्सको बारेमा खराब छ, तर आफैलाई सक्रिय पार्नु अचानक एक चरण मात्र टाढा छ।
13 मई 2020 मा 09: 47
सुरक्षित पैसाको आधारभूत सिद्धान्तलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंसँग असुरक्षित पैसा छ जुन असीमित र अनकन्ट गरिएको छ (यो संकटको समयमा हो) र यसले हाइपर मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ (जसलाई 'फिएट मनी' पनि भनिन्छ) वा तपाईंसँग पैसा छ जुन सुनौलो वा तेल जस्ता मानकसँग जोडिएको छ। ओपेक तेल स्तर पछाडि पतन भएको छ, तेलको मूल्यहरू नकारात्मक हुँदै गएको छ। स्वर्ण मानक वर्षौं पहिले जारी गरिएको थियो। Bitcoin नयाँ मानक देखिन्छ।
फेरि डिजिटलाइजेसनको खतरा छ, एआईको साथ मर्ज, तर प्रक्रियामा जुन रोक्न लगभग असम्भव जस्तो देखिन्छ, तपाईं पावर पिरामिड उल्टाउन सक्नुहुन्छ।
यहाँ कसरी "सुनको मानक" काम गर्दछ त्यसको वर्णन छ।
13 मई 2020 मा 09: 57
"फिएट मनी" वा "विश्वासघात पैसा" भनेको पैसा हो जुन यसबाट बनाइएको सामग्रीबाट प्राप्त हुँदैन (स्वर्ण र चाँदीको सिक्का जस्ता आन्तरिक मूल्य), तर विश्वास र विश्वासबाट कि यो वस्तु र सेवाहरू किन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। नाममात्र मान एक निश्चित तौल र बहुमूल्य धातुको सामग्रीमा आधारित छैन, तर आर्थिक अपरेटरहरूले मुद्राको मूल्यमा राख्छ भन्ने विश्वासमा आधारित छ।
कोरोना संकटको यस समयमा, फिएट पैसा द्रुत रूपमा अवमूल्यन भइरहेको छ। त्यो एउटा अस्थिर अवस्था हो।
13 मई 2020 मा 11: 29
पैसा र शक्ति बीच एक सीधा कुराकानी छ। अमेरिकी सेना र युद्धहरू निर्णय गर्ने क्षमता नभएको खण्डमा डलर त्यति मूल्य हुने थिएन। र पक्कै पनि अमेरिकी सेना, सैनिकहरूको इच्छा, डलरमा अमेरिकी आधिपत्य कायम राख्न।
13 मई 2020 मा 10: 09
तल दायाँ तिर हेर्नुहोस् कति पटक सुन, चाँदी र क्रिप्टो बेचिएको छ (कागजमा)। यसको मतलब यो हो कि, उदाहरणका लागि, १173 व्यक्तिले १ औंस चाँदीको दावी गर्छन्, १1२ ले हवा किन्छन्। अमेरिकामा चाँदीको उचित मूल्य २$१172 डलर हो, डलरको उचित मूल्य 👻 हो
बास रुइग्रोक लेखे:
13 मई 2020 मा 12: 36
किन WW2 को,
राष्ट्रिय समाजवादले एक निःशुल्क वित्तीय प्रणाली सिर्जना गर्‍यो जुन सार्वजनिक debtणको अन्त्य गर्थ्यो र बैंकरहरूलाई रोक्थ्यो…।
यसैले राष्ट्रिय समाजवादी जर्मनीको बारे निरन्तर झूट बोलियो।
जब मानिसहरूले महसुस गरे कि अत्याधिक सकारात्मक प्रणाली तथाकथित पीडितहरूले ध्वंश गरिसकेका छन् भने कस्तो रीसको कल्पना गर्नुहोस्।
माथि र तल, राम्रो नराम्रो हो, अपराधी पीडित छ।
घदाफी र सद्दाम हुसेनले उही कुरा गर्न कोशिस गरे ...
13 मई 2020 मा 16: 22
राम्रो टुक्रा मार्टिन।
प्रश्न यो हो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं कसरी पुलिस र सैन्य कर्मचारीहरू लिन लाग्नुहुन्छ। तपाईं यो संग प्राप्त गर्नुपर्छ। मैले किन कसैलाई सिपाहीको रूपमा मार्ने भनेर मैले कहिले बुझिन। युद्धमा तपाईलाई त्यो युद्धको वास्तविक कारण थाहा छैन। को आदेश मा र गलत ढोंगको तहत।
म अझै पनि पुलिससंग सहमत हुन सक्छु, तर तपाईका हाकिमहरूले तपाईलाई प्रदर्शन गर्न नदिन भने पनि। म कुनै पनि देशमा।
16 मई 2020 मा 09: 22
16 मई 2020 मा 23: 14
17 मई 2020 मा 13: 23
16 मई 2020 मा 14: 44
18 मई 2020 मा 13: 49
« डा। Plandemic भिडियो जुडी मिकोविट्स एक घटना २०१२ नक्कली समाचार जाल (भिडियो) हो
कोरोना स during्कटकालको समयमा पैसाको ठूलो मूल्यह्रासले हाइपरइन्फ्लेसन निम्त्याउँछ: बिटकइनको समाधान हो? »
कुल भ्रमण: 2.487.685